Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ပုံပြင်တို
Writer Sein Lyan Time 10:22 am
အင်း.. ခုတော့သဘောပေါက်ပြီပေါ့.. ပေါက်သင့်ပါပြီ.. ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ဆိုတော့လည်း... :P:P..(ဒါနဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ကို စိတ်ကောက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူးနော်...း))) )
ဒီပုံပြင်ထဲမှာ မိန်းကလေးက မြွေကို ဆေးကုပေးပြီး ပြန်လွှတ်ပေးရင် ရရဲ့သားနဲ့ ခေါ်ထားတာကိုး..
မကူညီသင့်ဖူး ဆိုတာထက် သံယောဇဉ်မထားသင့်ဘူး လို့ ပြောရမလိုပဲ..
အိုင့် ကို ပြောတာ နေမှာ...း(
ဟုတ်ကဲ့ စိတ်မထားတတ်သေးတာနဲ့ ပဲ စိတ်ဒုက္ခရောက်ပေါင်း မနည်းတော့ဘူး။
heyyyy Snake Nyi....
did you bite ur brother Ko Bo?
dont angry.. just kidding.. :P
ဖိုးစိန် စင်္ကာပူကို ပြောင်းတယ်ဆိုကတည်းက တနေ့နေ့တော့ ပြဿနာတက်ရင် ဒုက္ခလို့ တွေးမိနေတယ်။
ချစ်ချစ်ခင်ခင် ဖြစ်နေကြတာတွေ ဖတ်ရလို့ ကြည်နူးနေမိတာ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိသားစု တခုချင်းစီကနေ တနေရာထဲမှာ လာရောက်ဆုံဆည်းကြရတာဟာ ရှေးက ရေစက်ကြောင့်ပါပဲ။ သည်းခံပါ ဖိုးစိန်ရယ်။ အရာရာကို ဒေါသရှေ့မထားနဲ့ပေါ့။ သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက်တွေးပေး။ အများနဲ့ လိုက်လျောညီထွေနေနိုင်ရင် ပျော်စရာကောင်းမှာပါ။
တစ်ဖက်သားကို ကူညီတာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြွေဆိုးလိုမျိုးကျတော့ ကူညီရင်လည်း သတိနဲ့ပေါ့။ အကူအညီပေးသူ၊ အကူအညီလက်ခံရယူသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပြန်အလှန် ကျေနပ်နားလည် သိတတ်မှုရှိရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
18 June 2010 at 05:49
ဒဏ်ရာပရဗွနဲ့ အေးခဲနေတဲ့ မြွေကိုတွေ့ ရင် အမြန်သေအောင် ခေါင်းကိုထုပေးရတယ် သူလည်းကျေးဇူးတင်မှာပါ၊ ဝေဒနာချုပ်သွားလို.၊
ကိုယ်လည်းအကိုက်မခံရတော့ဘူးပေါ့ ။ နောက်တယ်ထင်လည်းရတယ် အတည်ပြောတယ်ထင်လည်းရပါတယ်။း)
Ko Pho Sein,
I like your post. so please let me post on my facebook. actually i posted it already. i am asking permission from you. if you don't like it, i will cancel it for you.
မသိင်္ါကျော်ပြောသလိုပဲ .. ဟုတ်တယ်
ကူညီပြီး ပြီးလိုက်သင့်တာ ဘာလို့ ချုပ်ချယ်လိုက်မိလဲ
ကူညီပြီးရင်လည်း လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသင့်ပါတယ် ..
ညီမမှာတော့ ကူညီတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး
လုပ်ပေးနိုင်လို့ လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပဲ ရှိတယ်
လူကသာ စေတနာ မှန်ခဲ့ရင် အချိန်တန်ရင် မြွေကိုပြန်လွှတ်ပေးသင့်တာပေါ့။